Kuvaka zvakare: Yakazvimirira Binary Package Verification System yeArch Linux | Kubva kuLinux
Kuvaka zvakare - Yakazvimirira Binary Package Verification System yeArch Linux
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kwe "Vakavaka" kwakaziviswa iyo yakamisikidzwa se yakasarudzika ongororo sisitimu yemabhinari mapakeji , que inobvumidza kuronga iko kuongorora kwemapakeji ekugovera nekushandisa inomhanya yekuvaka maitiro inofananidza mapakeji anokwanisa kuraswa nemapakeji akagamuchirwa semhedzisiro yekuvaka patsva kwenzvimbo yenzvimbo.
Mune mamwe mazwi, ino system inopa sevhisi inoongorora mamiriro eiyo packet index uye otomatiki tanga kuvaka zvakare mapakeji matsva munzvimbo yekureva, iyo nyika inoenderana nemamiriro ekunze Arch Linux main kuvaka package.
Paunenge uchinyora zvakare, nuances senge kunyatsoenderana kwekuenderana kunoenderana, iko kushandiswa kweasina kuchinjika uye shanduro dzematurusi ekuvaka, iyo yakafanana seti yesarudzo uye zvigadziriso zvekumisikidza, uye kuchengetedzwa kwemafaira egungano odhaira (uchishandisa nzira imwechete yekumisikidza).
Iyo yekuvaka maitiro masisitimu haibatanidze iyo compiler kubva mukuwedzera yakawandisa zvisingaenderane ruzivo senge zvisina kujairika kukosha, zvinongedzo kune faira nzira, uye data nezve iro zuva rekuunganidza uye nguva.
1 About Kuvakazve
2 Kuisirwa uye kuuraya
Parizvino chete rutsigiro rwekuyedza rwunowanikwa rwekutarisa Arch Linux mapakeji yakavakwa patsva, asi inoronga kuwedzera Debian rutsigiro munguva pfupi.
Iye zvino, zvinodzokororwa zvekuvaka zvinopihwa 84.1% yemapakeji kubva kuArch Linux repository, iye 83.8% kubva kune yekuwedzera repositi uye 76.9% kubva munharaunda yekuchengetera. Kuenzanisa, muDebian 10 nhamba iyi iri 94,1%.
Ipo, zvivakwa chikamu chakakosha chechengetedzo sezvavanokutendera iwe ipa chero mushandisi mukana wekuona kuti mapeti-e-e-byte mapakeji anopiwa neyakagovaniswa pakeji package inowirirana neavo pachavo vakanyorwa kubva kunobva
Pasina iko kugona kuongorora kuzivikanwa kweiyo yakaunganidzwa bhanari, mushandisi anogona kungopofomara kuvimba kweumwe munhu kuvaka zvivakwa, kukanganisa iyo compiler kana kuumbiridza maturusi uko kunogona kutungamira kune yakavanzwa mamaki kutsiva.
Kuisirwa uye kuuraya
Muchiitiko chakareruka, kumhanyisa kuvaka zvakare zvakakwana kuisa iyo yakavakwazve pasuru kubva kune yakajairwa repository, kuendesa iyo GPG kiyi yekuongorora nharaunda uye kumisikidza inoenderana system sevhisi. Izvo zvinokwanisika kuita samambure eakawanda akavakazve zviitiko.
Kuisa, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye mairi tinonyora iwo unotevera kuraira:
Waita izvi, ikozvino isu tinofanirwa kuendesa iyo GPG kiyi, kubvira Kuvaka patsva kunofanirwa kuongorora iyo Arch Linux boot mufananidzo, kune izvi mune terminal tichafanirwa kunyora murairo unotevera:
Mushure meizvi isu tinofanirwa kuwedzera mushandisi wedu kuboka Rakavakazve, kubvira tinogona kugamuchira kukanganisa:
Iye zvino isu tinongofanirwa kuona kuti Rebuilderd yatove kumhanya nezve system, yeichi, isu tinongofanirwa kunyora:
Uye kana isu tichida kugovera mhedzisiro pane network, isu tinofanirwa kunyora:
systemctl inogonesa - ikozvino yakavakazve kuvaka-kuvaka @ alpha
Iye zvino zvakakosha kuti utarise kuti Rebuilderd haizopinde muchiito kudzamara zvanyatsotsanangurwa kubva uko mapakeji ehurongwa akaenzanisirwa, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kugadzirisa iyo /etc/rebuilderd-sync.conf faira panogadziridzwa mafaera ekufananidza. uye iwo mazita eprofita akasarudzika:
Muenzaniso weizvi unotevera:
Kana iyo faira yagadziriswa, iwe unongofanirwa kugonesa iyo timer kuti ienzanise zvoga iyo mbiri:
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Rebuilderd, ivo vanofanirwa kuziva kuti yakanyorwa muRust uye inogoverwa pasi peGPLv3 rezinesi uye iwe unogona kutarisa zvese zvaro uye nekodhi Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Kuvaka zvakare - Yakazvimirira Binary Package Verification System yeArch Linux
Docker: Maitiro ekuisa yazvino vhezheni yakagadzika pane DEBIAN 10?
Anopfuura mazana manomwe mapakeji akashata anoshandiswa pakuchera akawanikwa muRubyGems